Need help my dearest localizers ? [ localize.help.1 ] | Mozilla Myanmar
Need help my dearest localizers ? [ localize.help.1 ]
မီးမြေခွေး မြန်မာဘာသာနဲ့ စမ်းသပ် ထွက်လာပြီးနောက် ဆက်ပြီး လုပ်ဖို့ရာ အများကြီး ကျန်ပါသေးတယ် ။ Mozilla ဝတ်ဆိုဒ်တွေ ကို ဘာသာပြန်နေတာလဲ တော်တော်များများ လိုနေပါ သေးတယ် ။ အကူအညီတွေ လိုအပ်ပါတယ် ။ ကူညီခဲ့ဖူး သူတွေ လဲ တစ်ချို့အပြောင်းအလဲတွေ ကြောင့် မသိလိုက်ရ ဖြစ်နေ ရင်လဲ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ။ ကူညီချင်တဲ့ လူတွေ အတွက်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သိသွားအောင် ပြောပြချင်ပါတယ်။
အရင် က ကျွန်တော်တို့ ဘာသာပြန်ခဲ့ကြတာ Narro ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲတစ်မျိုးနဲ့ မော်ဇီလာ က ပေးထားတဲ့ ဆာဗာမှာ ပြန်ရတာပါ။ အခု ပြောင်းသွားပါပြီ ပရောဂျက်တော်တော် များများ ( ဥပမာ မီးမြေခွေး ဘာသာပြန်ပရောဂျက် ) ကို Pootle ဆော့ဝဲ နဲ့ ဆာဗာအသစ်တစ်ခုမှ ပြောင်းပြီး ပြန်နေကြတာပါ ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်စာကတော့ http://mozilla.locamotion.org/ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြောင်းသွားတုန်းက ကျွန်တော်လဲ မသိလိုက်ပါဘူး ။ အရင် ပရောဂျက် က Strings တွေကို ဒီဘက်ကို သယ်လာပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူဇာအကောင့်တွေ ပါမလာတော့ ပါဘူး ။ ဒီဘက်မှာ ယူဇာ အကောင့်တွေ ထပ်ပြန်လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
How to register at new
Pootle Server ?
ပထမဦးဆုံး http://mozilla.locamotion.org/ ကို သွားပါ ပြီးရင် register ( အပေါ်ထိပ် ညာဘက် နား တွင် ) ကို နှိပ်ပါ ။
ပုံမှာတွေ့တဲ့ အတိုင်း ယူဇာနိမ်း ( ဆိုဒ် ထဲ ဝင်တဲ့ အခါသုံးဖို့ အမည် ) အီးမေလ်း နဲ့ ပတ်စ်ဝတ်တွေထည့်ပေးပါ ။ ပြီးရင် Register ကိုနှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ ပြီးရင် Spam စစ်တဲ့ Dialog လေး တက်လာပါမယ် ။ လူ (သို့) တစ်ခြား Spamming Programs တွေ ဟုတ်မဟုတ် စစ်တာပါ ။ များသော အားဖြင့် သင်္ချာ ပုစ္ဆာလေးတွေ မေးတာများပါတယ်။
ပြီးသွားပြီဆိုပြီး ပြောလာပါလိမ့်မယ်။ မပြီးသေးပါဘူး စာထဲမှာလဲ ပါပါတယ် အီးမေလ်းထဲ ဝင် ပြီး Activation လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Finished ! Not yet
ကိုယ် Register လုပ်ထားတုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ အီးမေလ်း ထဲကို Activation Email တစ်စောင်ရောက်နေပါလိမ့်မယ် ။ တစ်ခု ကလင်ခ့် တစ်ခု က ကုဒ်နဲ့ပါ။ အပေါ် က လင့်ခ် ကိုပဲ သုံးပြီး လုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနှိပ်ပြီး ခဏစောင့်လိုက်ပါ ။
Register လုပ်တာပြီး သွားပါပြီ။
Login ဝင်ကြည့်ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ ပရောဂျက် လင်ခ့် က ဒီမှာပါ http://mozilla.locamotion.org/my/firefox/ ။ ရှမ်းဘာသာ အတွက် လင်ခ့် က ဒီမှာပါ http://mozilla.locamotion.org/shn/firefox/ ။
အရင်ဆုံး မြန်မာဘာသာ ပရောဂျက် လင်ခ့်နဲ့ အစမ်းပြပါမယ် ။
Project Folders !
လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ အားစိုက်ပြီး လုပ်နေတဲ့ အပိုင်းတွေကတော့ ။
စတဲ့ ဖိုင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ရာရာခိုင်နှူန်းပြီးမြောက်သွား တဲ့ အခါကျမှ အခြား ဖိုင်တွေကို ဆက်ပြန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးစားပေး ဖိုင်တွေပေါ့ ။
ကဲ အခုဆိုရင် တော်တော်များများ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလို့ဆို နိုင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်တဲ့ အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ Unicode Standard Encoding ကိုသုံးပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင် Unicode စနစ်ကို လိုက်နာတဲ့ ဖောင့် ကို သုံးပါတယ် ။ ယူနီကုတ် ဖောင့်တွေကတော့ များပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သာလွန် ဆိုတဲ့ ဖောင့် ကို သုံးစေချင်ပါတယ် အခြားဖောင့်တွေလဲ ရပါတယ်။ သာလွန်က အခုနောက်ပိုင်း ဆက်ပြီး Develop လုပ်နေတာလဲ ရှိတယ် Update ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ် ။ ဒီကနေ ဒေါင်းလုဒ်ချလို့ရပါတယ်။
စက်ထဲ ကိုဖောင့်သွင်းတာကတော့ Window မှာဆို ရလာတဲ့ ဖောင့် ဖိုင်ကို Double Click or Open လုပ်ပြီး သွင်းရပါတယ် ။ အခြား Mac , Ubuntu , Fedora စတဲ့ OS တွေမှာလဲ ဖောင့်တစ်ခု ကိုအင်စတော လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် များသောအားဖြင့် Double Click >> Install Font နဲ့ ပြီးပါတယ်။
ဝတ်ဆိုဒ် ကနေ ပြန်မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဘယောက်ဆာလိုပါတယ်။ ဘယောက်ဆာကိုတော့ မီးမြေခွေး မြန်မာဗားရှင်း ( သို့ ) မီးမြေခွေးနောက်ဆုံးဗားရှင်းကို သုံးစေချင်ပါတယ်။ Testing ပိုင်းနဲ့ Usability ပိုင်းအတွက်ပါ ။
ဖောင့်ရပြီဆိုတော့ ရိုက်ထည့်ဖို့အတွက် ကီးဘုတ်လိုပါသေးတယ် ။ ကီးဘုတ်ထဲမှာတော့ အခြား ကီးဘုတ်တွေလဲ ကောင်းပေမယ့် ကျွန်တော်က တော့ Keymagic ကို သုံးပါတယ်။ သူက Layout မျိုးစုံနဲ့ ရိုက်လို့ရပါတယ်။ Official Website ကနေ သွား ဒေါင်း ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။
Start Localization !
ဖိုဒါတစ်ခု ခြင်းဆီ ဟာဆိုရင် အောက်မှာ Sub-Folders အခွဲတွေ ဖိုင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ။ တစ်ချက်ခြင်းဆီ ဝင်ကြည့် ပြီး မပြီးသေးတဲ့ စာလုံးတွေကို ပြန်တာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါ ။ ဒါမှမဟုတ် လဲ Project Home မှာ ရှိတဲ့ Translate ဆိုတဲ့ Tab ကို နှိပ်ပြီး မပြန်ရသေးတဲ့ စာလုံးတွေကို တန်းစီပြီး ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ် ။
လူအများကတော့ Shortcut လို့သိပါတယ် ။ မသိတဲ့ လူလဲ မသိဘူးထင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ အစကနေပြန်ရှင်း ပြပါမယ် ။ Accelerator ဆိုတာ Menu တွေ Button တွေ Options တွေနဲ့ Preference တွေကို သွားတဲ့ အခါ မောက်စ်မသုံးတော့ပဲ မြန်မြန်သွား မြန်မြန်ပြင်လို့ရအောင် သုံးတဲ့ Keyboard Shortcuts တွေပါ ။ ဝင်းဒိုး ကီးကို နှိပ်ရင် Start Menu ရောက်တာ ၊ Control + C , Control + V စတာတွေဟာ အကောင်းဆုံး ဥပမာတွေပါ ။
ဘာသာပြန်ရင် အဲ့စာလုံးတွေကို Identifier ( သတိပေး သို့ အချက်ပြ )အနေနဲ့ ရှေ့ မှာ & စာလုံးထည့်ထည့်ပေးထားပါတယ် ။ အင်္ဂလိပ်စာလုံး မှာ &Toolbars ကို မြန်မာလို ပြန်တဲ့အခါ &ခလုပ်ဘားတန်းများ ဆိုပြီး ပြန်လို့မဖြစ်ပါဘူး ။
Shortcut နှိပ်တဲ့ အခါ ခ အက္ခရာ ကိုနှိပ်ပြီး သွားမယ်ကွ ဆိုပြီး လုပ်လို့မရပါဘူး ။ Shortcut တွေဟာ အင်္ဂလိပ် ( US ) ကီးဘုတ် အတိုင်းပဲ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။
” (&T) ခလုပ်ဘားတန်းများ ” ဆိုပြီးနဂို အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းမှာ Identify လုပ်ခံရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးကို ယူ ရှေ့ထုပ် ကွင်းစကွင်းပိတ် ထဲထည့်ပြီး Flag “&” ပြန်ထည့်ပေးတာပါပဲ ။
ဒါလတ်တစ်လော အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ထင်ပါတယ်။ သာလွန်ကွန်ပျူတာ စနစ် ၊ ဥူဘွန်တု မြန်မာဗားရှင်း စတာတွေမှာလဲ ဒီထုံး(နည်းလမ်း)ကို ပဲ သုံးနေကြပါတယ် ။ ဒီတော့ အားလုံး တစ်ညီတစ်ညွတ်ထဲ ဒီအတိုင်း ပြန်ဖို့ ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်အရေးကြီးတာ တစ်ခုက Placeholders ဆော့ဝဲတွေဟာ စာကြောင်းတွေကို Rendering လုပ်တဲ့ အခါမှာ တစ်ခုကို ခဏခဏထပ်မရေးရအောင် Unicode String သို့ Variable ရှိတဲ့ Placeholders တွေကို သုံးကြပါတယ် ။ ဥပမာအား ဖြင့်​ ပြောရရင် [ &Form &amp; Search History ] ဒီစာကြောင်းမှာ ထူးခြားတာက Placeholder တစ်ခု ရယ် Accelerator တစ်ခုရယ်ပါတယ်။ Accelerator ကတော့ အစောကပြောသွားလို့ သိပြီးသွားဖြစ်ပေမယ့် Placeholder ကိုတော့ မေးခွန်းထုတ်နေကြမယ်ထင်တယ်။
ကိုယ့်ကိုကို သွက်တယ်လို့ထင်တဲ့ လူတစ်ချို့လဲ မြင်တော့မြင်မိကြမယ်ထင်တယ် ။ &amp; သဒ္ဒါနည်းလမ်း အရ ဘာအဓိပ္ပာယ်မှမရှိပဲ ဒါကြီးကို ကြားထဲဘာလို့ လာထည့် ထားလဲလို့ထင်ကြမှာ ပါ။ တစ်ချို့ html နဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိတဲ့လူတွေလဲ ရင်းနှီးပါလိမ့်မယ် Special Entities တွေဖြစ်ပါတယ် ။
ဆော့ဝဲကအဲ့ Placeholder လေးကို ဖတ်ပြီး သူက output အနေနဲ့ “&” ဆိုတာလေးကို ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းကွာ ပင်ပန်းလိုက်တာ အစကတည်းက အဲ့လို & ရေးလိုက်ရင် ကောင်းရော လို့ပြောပါလိမ့် မယ် ။ [ &Form &amp; Search History ] မှာ အခြား & တစ်လုံး ကို ထိပ်မှာ ထည့်ထားရတာ တွေ့မှာပါ ။ မထပ်အောင်လို့ မတူအောင်လို့ Software တစ်ခုလုံးမှာ အဲ့လို သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လျှောက်လုံး & ကို Flag အနေနဲ့ Accelerator တွေညွှန်းဆိုပြတဲ့ အခါမှာ သုံးမှာဆိုတော့ & ဆိုတဲ့ Word ပါတဲ့ စာကြောင်းတိုင်းမှာ &amp; ဆိုတဲ့ Placeholder တွေနဲ့အစားထိုးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်က ပုံစုံ အတိုင်းပြန်ကြည့်ရအောင် ။
ကျွန်တော်ကတော့ အထက်ပါအတိုင်း ပြန်လိုက်ပါတယ် ။ မဟုတ်သေးဘူးဆို အဲ့ String မှာထပ်သွားပြီး ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ် ။
ကဲ Special Entities လဲ မဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်သိထားတဲ့ Accelerator Flag လဲ မပါဘူး ။ Placeholder လဲမဟုတ်ဘူး ။ ဒါပေမယ့် သဒ္ဒါ နည်း အရလည်း အကျုံးမဝင်ဘူး ။ အဲ့လိုစာလုံးတွေလဲရှိပါတယ် ။ များသော အားဖြင့် % ဆိုတဲ့ Flagging နဲ့စပါတယ်။ ဆော့ဝဲကို ကြိုတင်ကြေညာထားပြီးသား သို့ Dynamically ပြောင်းလဲနေမယ့်တန် ဖိုးတွေ ဆို Print() လို့ခေါ်ပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကိုကျော်စွာသန့် ဘာသာ ပြန်ထား တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ %Spx ဆိုတဲ့ print() value တွေက သူ့အလိုလိုပြောင်းလဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Document ထဲက Style ကိုလိုက်ပြီး ဖော်ပြမယ့်တန်ဖိုးတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူ့ကို ယခုလို print() တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ပြီး သုံးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဆိုပါ % သင်္ကေတနဲ့ Flag ထားတဲ့ print() တန်ဖိုးမှန်သမျှကို မပြန်ပဲ ဒီအတိုင်းပြန်ကူး ပြီး ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှာ တွေ့တဲ့ အတိုင်း scaled to ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ” ချိန်ညှိထားသည် ” ဆိုတဲ့ Phrases ကို %Spx x %Spx တွေရဲ့ရှေ့မှာထားဖို့မလိုပါဘူး ။ ဒါကမှ Localize ရဲ့အဓိက အနှစ်သာရ အပိုင်းလို့လဲပြောလို့ရပါတယ် ။ မြန်မာလိုဖတ်ရအဆင်ပြေအောင် နောက်ကိုပြောင်းထားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ခွင့်ရှိလားဆိုတော့ ရှိပါတယ် ။ အဓိကက နားလည်ဖို့ပါ ။ သုံးဆွဲသူ ယူဇာတွေ နားလည် သွားဖို့အတွက် အခုလို ဝါကျအထားအသိုတွေ ပြောင်းခွင့် ပြင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေ လုပ်ထားတဲ့ အတိုင်း ယူသုံးလို့ အဆင်မပြေပါဘူး ။
ဒါတွေကို အရင်သိထားပြီဆိုရင် မီးမြေခွေးမှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ဆော့ဝဲကို ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြန်တဲ့ အခါ အကူအညီရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ လွဲနေတာရှိရင်လဲ အပြုသဘောနဲ့ဝေဖန် နိုင်ပါတယ်။
မေးခွန်းတွေ မေးမြန်ချင်တယ်ဆိုရင် မော်ဇီလာမြန်မာ ဆိုတဲ့ Facebook Group ထဲကို ဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။